Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Elementary OS 0.2 Luna | Site na Linux
Ivan Linux | | Ọdịdị / Nhazi
Achọpụtara m na ọkwa mbụ m nwere nnabata dị mma, m ga-anwa ịga n'ihu na-eziga ihe bara uru yana oge na-atọ ọchị ... Amaara m na ọ dị ntakịrị oge mana m ewetara gị ụfọdụ ndụmọdụ maka Elementary OS 🙂
7 7. Chọta ngwa ndị ọzọ na Centerlọ Ọrụ Software
8 8. Nhazi
O yikarịrị ka mgbe ahapụchara ya Elementary OS Luna mmelite ọhụrụ apụtawo maka nchịkọta dị iche iche nke onyonyo ISO nke ndị otu Elementary kesara na-abịa.
N'ihi nke a, mgbe emechara nwụnye ọ na-atụ aro mgbe niile ka ị na-agba ọsọ ahụ Nwelite Njikwa ma ọ bụ site n'ịgba ọsọ ndị a site na ọnụ:
Accessnweta Nkwado Asụsụ site na Ntọala Sistemụ ma site n'ebe ahụ ị ga-enwe ike ịgbakwunye asụsụ ịchọrọ.
N'ihi nsogbu iwu, Elementary OS enweghị ike ịgụnye usoro nke nchịkọta nke, na aka nke ọzọ, dị oke mkpa maka onye ọrụ ọ bụla: codec iji kpọọ MP3, WMV ma ọ bụ DVD ezoro ezo, ederede ndị ọzọ (a na-ejikarị na Windows), Flash, ndị ọkwọ ụgbọ ala (iji iji ọrụ 3D ma ọ bụ Wi-Fi mee ihe nke ọma), wdg.
Ọ dabara nke ọma, na Elementary OS installer na-enye gị ohere ịwụnye ihe a niile site na ncha. Naanị ị ga-eme ka nhọrọ ahụ rụọ ọrụ na otu n'ime ihe nkwụnye ihe nrụnye.
Ọ bụrụ na ịnweghị, ịnwere ike ịwụnye ha dị ka ndị a:
Ọ bụrụ na Ubuntu anaghị achọpụta kaadi gị, ịnwere ike ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala 3D gị (nvidia ma ọ bụ na) site na ịchọ Ngwá Ọrụ Ngwakọta Ngwaike.
Cardsfọdụ kaadị eserese ATI agaghị arụ ọrụ na Elementary OS ọ gwụla ma ị jiri ndị "ihe nketa" ATI were wedata sava X. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị ga-achọpụta ngwa ngwa ihe kpatara Elementary OS agaghị ebido nke ọma. Iji dozie ya, gbaa iwu ndị a:
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enweghị ike ibi na-egeghị MP3, M4A na ndị ọzọ proprietary formats, na ị gaghị adị ndụ na ụwa obi ọjọọ a na-enweghị ike igwu egwu vidiyo gị na MP4, WMV na usoro ndị ọzọ, enwere ụzọ dị mfe:
Iji tinye nkwado DVD ezoro ezo (niile "mbụ"), m mepere ọnụ wee pịa ihe ndị a:
GetDeb (nke a na-akpọbu Ubuntu Pịa Ma Run) bụ webụsaịtị ebe a na-arụpụta ngwugwu Deb na ụdị nsụgharị ndị ọzọ na-anaghị abata na nchekwa ndị a na-emebu ma nye ya onye ọrụ njedebe.
Playdeb, ebe nchekwa egwuregwu maka Ubuntu / Elemntary OS, bụ ndị otu ndị nyere anyị getdeb.net kere, ebumnuche nke ọrụ a bụ iji nye ndị ọrụ Ubuntu ebe nchekwa na-enweghị akwụkwọ na ụdị nke egwuregwu kachasị ọhụrụ.
Ntinye: Softwarelọ Ọrụ Software Na-achọ: Synaptic. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike itinye iwu na-esote na ọnụ ...
Ọ dịghị mkpa ebe ọ bụ na anyị nwere ike iji iwu "apt-get" mgbe niile, mana ana m ahapụ ya maka ndị chọrọ:
Ntinye: Softwarelọ Ọrụ Software Na-achọ: nkà. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike itinye iwu na-esote na ọnụ ...
Ntinye: Chọọ Software Center: gdebi. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike itinye iwu na-esote na ọnụ ...
7. Chọta ngwa ndị ọzọ na Centerlọ Ọrụ Software
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ngwa iji mee ihe ịchọrọ ma ọ bụ na ị nweghị mmasị na ngwa ndị na-abịa na ndabara, ị nwere ike ịga na Softwarelọ Ọrụ Software.
Firefox, ihe nchọgharị weebụ (Anaghị m akwado Chromium ma ọ bụ Google Chrome)
FreeOffice, Office Office (MS Office mana n'efu)
Tinye Mmelite Ndị Isi Community Community PPA
Umu isi Tweaks
Elementary Tweaks na a nutshell bụ ihe ị nwere ike hazie kacha na elementrị
Onye nnabata bara uru! Wụnye ya na ị gaghị akwa ụta ya 😉
Wụnye Gburugburu, Ihe ngosi wdg.
Advanced customization, jelii-dị ka window mmetụta
Ọ bụrụ na ị chọrọ ị nwere ike ite ihe a ma ọ bụ nnwale a nta ọzọ na-eme ya 😉
Ka anyị bido 😀
Ozugbo etinyere anyị, anyị na-emechi nnọkọ wee pịa akụ ma họrọ Oge Xfce ma bido oge.
Anyị na-amalite na ntọala ndabara (Guzosie obere pantheon na xfce xD)
Ugbu a, anyị wụnye kwin:
Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ị nwere ike iwunye Dolphin na Igbe (Ka akwadoro):
Anyị na-aga n'ihu ..
Anyị na-abanye na nhazi na nhazi na Oge na mmalite na ngwa autostart taabụ
Anyị gbakwunye ngwa ndị a:
Anyị na-ezo ogwe:
Anyị mechie ma banye.
Ma chọọ ka anyị chọọ:
Changegbanwe kwin nhọrọ:
nke ahụ bụ otú nke m si bụrụ 😛
Nke a bụ ikpere m:
CPU: Intel® Atọm ™ CPU N570 @ 1.66GHz × 4
Nchekwa n'ime: 250 GB
Nlereanya: Na-achọ Otu 257
Ndụmọdụ maka elementrị: http://www.elementaryupdate.com/ (English)
Echere m na ị masịrị ya, echefula ịgbaso m na twitter, dị ka, ikwu na denye aha xD...
Tinye ebe a ma kwuo ọkwa m: http://strawpoll.me/703848
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Elementary OS 0.2 Luna
Kedu ihe kpatara o ji dị ka nnomi na mado nke ihe ị ga-eme ma wụnye ubuntu 12.04?
Aha nwere ike ịbụ oyiri-mado, mana ọdịnaya, ọ bụghị.
ElementaryOS bụ ezigbo distro, ọsịsọ ma mara mma
Onwe ya, ọ bụ naanị Ubuntu na-ege ntị na ihe ọ bụla! : /
M na-atụ ụjọ na ị na-ezighi ezi, na mbụ m jiri Ubuntu (akwụsịrị m iji ya na ụdị nke 12.04, mgbe mmechuihu nke ịdị n'otu, ọ bụ ezie na mmadụ anaghị alụ di na nwunye, etinye m ndị ọzọ) na mgbe ahụ m ga-eji apata ụkwụ na obere arụmọrụ, ihe ijuanya m bụ na Ubuntu na gburugburu ebe dị iche iche dị nwayọ nwayọ (ịdị n'otu meriri ọtụtụ ihe doro anya), ihe ịtụnanya m mgbe ị wụnye eos bụ gburugburu ebe obibi siri ike na ngwa ngwa, ịghara ịkọwa na pantheon mara mma karịa ịdị n'otu gnome na kde al mgbe ị na-ejigide ịdị mfe nke onye ọrụ-mfe.
You bụ onye ofufe nke iCarly ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ Dan Schnneider na-emepụta? Maka na oge niile, na ihe ndị ahụ na-egosi na ha hụrụ Nick, ha na-eji ube dochie apụl.
Mba, ibido, amaghị m ihe iCarly ma ọ bụ Dan bụ, ọ bụ n'ezie okwu ebumnuche n'agbanyeghị na ọ dị ka ọ dị, n'ihi na anwalela m Elementary OS Luna, na ilele ya anya mbụ masịrị m mana mgbe m hụrụ ihe ọ dabere na kernel (nke ochie) ọ hapụrụ ịbụ ihe m chere na ọ bu n'obi, ka ọ bụrụ "mmeghe na ojiji." Tụkwasị na nke ahụ, na ịbụ na ọ bụghị akwụkwọ nke mac n'ụzọ ihu abụọ dị ka Unity bụ, ọ bụrụ na Unitydị Unity chepụtara echiche nke Mac dị ka Dock, na site na itinye ya n'aka ekpe ma gbanwee ọdịdị ọ na-ezo nke ọma, mana echiche a bụ onwe ya, wdg, wdg. Ọ bụrụ na Elementary masịrị m, n'ihi na maka m ka ube guzobere, yana n'ụzọ ziri ezi dị ka MacOSX na-arụ ọrụ, ọ bụghị Mac, amaara m, mana iji ya arụ bụ ihe dị mkpa, mgbe OSX niile mechara dị mma, dịka ọmụmaatụ Launchpad ma ọ bụ kpughee, nke m na-amaghị ihe ọ bụ na ekele ube Amaara m ya ugbu a, na ha bụ nke dị mkpa na-aba uru, na m na o siri ike ịmata ya. Tupu m na-achọ desktọọpụ ka m nwee ike ikwusa ozi ọma Linux n'emeghị ihere (na omume GUI) n'ihi na achọtala m ya.
Ugbu a, Stallmantosos, Open Source Puritans, trolls, wdg. Ga-akụ m ihe n'olu m. wdg. Ọ dị mma, echegbula, agaghị m aza. Ọ bụrụ na ndị ọcha a enweghị ihe, ọ bụ nnwere onwe, ee, ihe na-emegiderịta onwe ya mana ọ bụ eziokwu, hapụzie ka ndị ọzọ họrọ, hapụ mkpasu iwe mgbe ihe na-adịghị ha mma, hapụ Ubuntu ka ọ rụọ ọrụ ya. Na ngwụcha ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na elementrị sonye na ube, Libre Office with Open Office, wdg. wdg. na ogologo wdg. kama "ndụdụ", "jikota", "jikota", "jikota"….
Ọfọn, pearOS kwụsịrị ịdị ...
Ọ dị mma, eOS nwere ngwanrọ oge ochie, mana na Linux nke ahụ abụghị nsogbu bụ isi, ọkachasị ihe m na-eme mgbe niile mgbe ị na-etinye eos bụ melite kernel na ụdị kachasị dị ugbu a, nke dabere na Ubuntu 12.04 LTS bụ nnukwu uru ebe ọ bụ na ha na-eweta mmelite na-enweghị usoro iji wụnye nsụgharị ọhụrụ.
Etinyela ndị ọkwọ ụgbọ ala amd, ha agaghị arụ ọrụ nke ọma na gala, ọ bụ ahụhụ dị njọ.
Dị ka anyị kwuru nwanne Onyekwere
Ejila n'aka ATI.
Nwanna stallman ga-agwa gị ihe ka njọ gbasara nvidia XD, ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ọ ga-asị na ịzụta intel lol
Ebe ọ bụ na enweghị m ike ịzụta laptọọpụ Leemote mgbe ahụ, m ga-adabere na Intel chipset (NVIDIA dị oke ọnụ ma ọ masịrị m inweta ọtụtụ na nhazi eserese na Intel graphics).
PS: Zụta mbadamba Gigabyte, ọ bụghị nke Foxconn.
Gigabyte, Asus ma ọ bụ Asrock.
Atọ ndị ahụ emebeghịrịrị m ike (ọbụnadị ụdị ndị ahụ ji ụkpụrụ ụlọ AMD).
Dị ka Stallman kwuru na !!!!!!! daalụ chukwu ekele dịrị m ugbua nwere ihe na-eme ka m gbuo ya.
Ma i nwere ike iji Kwin 😉
Achọghị m ka m bụrụ oriri na ọ pooụ partyụ, mana ị na-eji Iceweasel ESR? 25dị XNUMX (ntọhapụ alaka ụlọ ọrụ) na-agba ọsọ dị ka amara. Site na ihe esere esere ATI / AMD, enwerem ihe ncheta ojoo mgbe m n’eji Windows XP wee kporo kaadi vidiyo ATI.
Site na KDE, emesịrị m chọta udo m nke desktọọpụ desktọọpụ. XFCE bara uru dika KDE, mana m ga-eji ya maka PC na kaadi eserese nke na-agaghị arụ ọrụ maka igwu Half-Life 1.
Ma site n'ụzọ, ekele maka iwepụta oge iji mee onwe gị elementrị QT. Ka anyị hụ ma m ga - eme KDE Elementary.
Ihe ị chọrọ bụ iwu xDD
M ga - eke mpempe akwụkwọ iji mee: Elementary OS KDE
Ọ bụrụ Iceweasel, ike gwụrụ m iziga data na Mozilla xD (M na-eji Debian nso nso a wee hụ Iceweasel n'anya)
N'okwu m, Iceweasel bụ ịhụnanya n'anya mbụ. Iceweasel ghọrọ Firefox m na-arọburu anya, yana inye m udo nke uche gbasara data m.
Ngalaba mwepụta emelitere nke ukwuu na ndakọrịta na Firefox plugins, yabụ ọ na-eme ọmarịcha.
Ọ bụrụ na ha ebipụta post ahụ dị na nyocha (nke m), ọ ga-abụ ihe ịtụnanya maka gị na KDE 😉 gị
Ọfụma m KDE m ka nọ na beta. N'oge ahụ, ọ bụ na-polishing na-adọ.
Onye ọ bụla nwere ike ịkwado m distro nke nwere ezigbo nkwado, enwere m kaadi HD8470 na ubuntu 12.04.4 lts ọ naghị amalite usoro mgbe ị na-emelite kernel ..
Zaghachi na panchomora
Long manjaro kernel 3.12 na anụ ahụ nke a na-eche na ọ na-eweta mmelite maka amd, kernel arụnyere na iwu dị mfe wee họrọ nke kernel ga-ebu.
kernel emeela agadi, maka kaadị gị, ị ga-eji ubuntu 13.10, yana 3.11.
Daalụ maka ozi pandev na jomada
Elementary OS ekwesighi ibu maka ndi oru ichoputa novice? Kedu ihe kpatara na onye ọrụ novice ga-agba ọsọ n'iwu niile ahụ?
Ebee ka ọ dị mfe?
Amaghị m na ọ siri ike ide iwu ole na ole 😉
Ahụbeghị m na ebe ọ bụla na-ezo aka Elementary dị ka distro maka kọmpụta kọmputa, ikekwe maka newbies n'ụwa a nke GNU / Linux ee.
Mana maka kọmpụta kọmputa echeghị m na enwere distro ọ bụla, ị gaghị agakwa ebe dị anya, n'oge na-adịbeghị anya, ha mere edemede na muylinux banyere otu o si esiri ụfọdụ ike ịchọta bọtịnụ nbudata Ubuntu na ibe ha.
Na ahụmịhe nke usoro OSX hapụrụ. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ihe siri ike, ana m akwado ka ị mụta iji wuo Linux site na ịchacha ma ọ bụ jiri Gentoo.
Ọ bụ naanị ihe m kpọrọ asị banyere Linux, ị ga-egbusi oge ịwụnye ọtụtụ mmemme, ọtụtụ n'ime ha nwere ike abanyelarị.
Isi okwu bụ na ElementaryOS adịla njikere iji ya. Nke a na-abịa mgbe e mesịrị bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ...
@elav Ikwuru eziokwu, mana gini kpatara itinye mmemme ndị ọzọ nke na-agaghị abara onye ọ bụla uru ma mekwa ka OS dịkwuo elu? Echere m na Mr. @pedro nwere ụzọ na-ezighi ezi nke iche echiche banyere GNU / Linux, nri?
Daalụ maka ịza ajụjụ na post m elav!
Hatredkpọasị ahụ dabere n’amaghị ama na amaghị ama gị (dịka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịkpọasị niile) Ọ bụrụ na achọrọ m ihe na ihe niile ịchọrọ, budata OpenSUSE, ọ bụ DVD zuru ezu (4.7) ị wụnye ya kpamkpam ma enwere m obi abụọ na ị na-efu ihe.
@Staff Ha na m na-ekwu na ibu «4.7» GB ole na ole, nri? xD
Daalụ maka ịza ajụjụ na mkpara m post!
Debian DVD1, biko!
Ma ọ bụ Debian Wheezy DVD1. Ọ dịghị ihe dị mma karịa nke ahụ.
Meh, ma ọ bụrụ na ịchọghị Mgbe Mgbe Wụnye dị ka nke ahụ, m ga - atụ aro ka ị wụnye Russian Fedora Remix, nke bụ ndụdụ nke Fedora nke ị na - achọghị ịme ihe Mgbe Wụnye.
Lol, na windo ọ bụ otu ihe ahụ, na ọ bụrụ na vlc, na ọ bụrụ na itunes, na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ microsoft, na ọ bụrụ na codecs nke na pascual, na ọ bụrụ na antivirus ...
Luckily antivirus na Linux adịghị ee
Ọ bụ otu ihe ahụ, naanị na na Linux ka ọtụtụ n'ime ha abanyelarị, na-enweghị ele anya n'etiti Softonic na shit nke ụdị ahụ.
Mgbe m nwere windo na Linux, agbaghara m xD terminal
Ekele na ekele maka ịza ajụjụ kuki!
Ọ dịghị ihe dị mma karịa ọnụ. Ọbụnadị iwu Windows na-abịa nso na ikiri ụkwụ gị.
N'etiti Softonic slop na ukara repo, m na-adabere n'ebe repos.
Anọ m na-eji elementrị OS ruo oge ụfọdụ mana enwere m ụfọdụ nsogbu na ya mgbe m jiri laptọọpụ m kwụsịrị na chaja, ọ na-ejighị n'aka ma nwayọ nwayọ ma eleghị anya ọ bụ n'ihi na batrị emeela ochie ma ghara inye ezigbo arụmọrụ.
Ana m atụle ịzụrụ laptọọpụ ọhụrụ, ọ ga-amasị m ka ọ nọrọ na ihuenyo 11.6 ″ yana nhazi i3 ma ọ bụ i5. Kedu onye ị kwadoro ???
Ikekwe ajụjụ a enweghị ihe jikọrọ ya na isiokwu nke isiokwu ahụ, mana dịka ụfọdụ ozi na-ekwu banyere Lemote na ngwaike, ọ bụ ya mere m ji kpebie ime ya.
You nwalela ịtinye jupiti? yabụ opekata mpe, ị ga - ama ma onye nhazi gị dị na 100, ọ dị mma, kama hazie ya iji chekwaa batrị ma ọ bụ nwekwuo arụmọrụ.
ELementary OS bụ distro nke masịrị m nke kachasị ruo taa. Ọ na-abịa naanị site na elemental, ị na-ekpebi ihe ị ga-etinye na ya. Anya ahụ dị ịtụnanya, anaghị m ahụ mkpa ọ dị itinye gburugburu ebe ọzọ.
Emere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile site na ngwanrọ ngwanrọ site na ihe m gụrụ na elementaryupdate.com, na-eji eziokwu ahụ bụ na m na-achọ ụzọ m ga-esi belata ma bulie bọtịnụ dị ka Windows.
Midori (ihe nchọgharị ahụ gụnyere) bụ slop maka ụbọchị, ma m wụnye Chrome (ebe m mekọrịtara data m niile) .. mana post ahụ anaghị akwado ya. Enwere ihe ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla maka ọchịchọ dị ọcha ị kwadoro Firefox?
Maka na o sitere na Google ¬_¬ na onye ma ihe Google nwere ike ịme, ọ kaara m mma ịkwado Iceweasel
Ma ọ bụ Chromium (na-enweghị ịbanye na GMail gị, n'ezie). Opera apụworị nkwado ya maka GNU / Linux (ụdị nke ugbu a adịghị maka penguuin, yabụ ana m edebe Opera 12.16 dị ka ihe ncheta ruo mgbe ha mere ụdị ọhụrụ maka GNU / Linux ma ya na Opera Link).
Ma ọ bụrụ na anyị jiri ndụdụ ọkụ were gbanye Firefox wee mee ya sọftụwia! ok ok, enwere m obi uto xD
Maka ugbu a, nke dịkarịrị nso na Qupzilla, mana ahụrụ m na nsonaazụ ya egbuola.
M na-eji Iceweasel na Firefox karịa Chromium / Chrome. Nsogbu a abụghị naanị Google, mana na ntinye Chromium / Chrome na Debian, ọ nwere ike bụrụ na ị hụghị vidiyo HTML5 na ụfọdụ vidiyo vidiyo nke ọma (ọ bụrụ na ịmaghị etu esi ahazi nhazi ahụ iji mezie njehie ndị ahụ).
Magburu onwe ya, desktọpụ gị dị ezigbo mma, ọ bụ ezie na m gbalịrị Elementary OS na USB Live ma echere m na ịwụnye ya n'apata m n'ihi na ọ meghị ka m kwenye ọ bụ ezie na ọ dị oke mma lol, site na imepụta m ka mma ịwụnye ube OS ma ọ bụrụ na ọ bụ maka ngwa, nhazi na ndị ọzọ iji zere usoro ndị a ka mma m na-etinye Linux Mint.
Zaghachi Dr. Byte
Ihe na-adịghị m mma banyere ube OS na L-Mint bụ na ha nwere Adobe Flash Player arụnyere
Enwere m nsogbu ịwụnye Elementar OS. Ihuenyo ahụ dị ka "pixelated" enweghị m ike ịkọwa ya nke ọma, enwere ọnya ọcha na ihuenyo niile. The OS na-agba ọsọ were were na mma, naanị nsogbu m nwere bụ na. Aro ọ bụla?
Ndewo enyi m ekele maka post, hey achọrọ m ịjụ gị ihe kpatara na mgbe m wụnye OS enweghị m wifi, ị hụrụ, ọkwọ ụgbọala m bụ Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter, abughi m onye ọhụụ na linux, a na m eji ya kemgbe ọtụtụ afọ ma nkesa a dị m. Magburu onwe ya, m ga-arịọ gị ka ị biko nyere m aka idozi nsogbu m, daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu. Site n'ụzọ, nbudata na eriri ahụ dị mma, ọ bụghị nsogbu na iso, ebe ọ bụ na kọmputa ọzọ ejiri m ya n'enweghị nsogbu, agbalịrị m 32 na 64 ibe n'ibe.
Zaghachi Luis Siller
You nwalela ịwụnye kernel ọhụrụ jikọọ na ethernet?
playdeb na redeb repositories adịkwaghị kwụsie ike. Ọrụ ahụ kwụsịrị imelite ihe nwa oge ugbu a na - akpata nsogbu. awụnyere ya
Ndewo, onwe m masịrị ElementaryOS, mana enwere m nsogbu abụọ; otu, enweghị m ike ịmegharị windo na ịpị alt + (ejiri m nke a), na abụọ, gịnị kpatara na enweghị m ike itinye akara ngosi na folda na desktọọpụ? na olee otu m si eme ya?
Rosel Nwachukwu dijo
Zaghachi na RosVel
wụnye elemenatryosluna na mgbe ịmalitegharị n'ụtụtụ echi m nwetara ozi ahụ.
elementaryosluna desingblacksystem-system-ngwaahịa-Aha tty
elementaryosluna desingblacksystem-system-product-Name nbanye:
agaghị m ekwe ka m nweta sistemụ
ị nwere ike imere m nnukwu amara nke inyere m aka.
Ọ bụ oge mbụ m wụnye elementrị na ọ dọọrọ uche m na mgbe m pịa bọtịnụ aka nri ọ dịghị ihe ọ bụla, ọ na-enye gị nhọrọ iji mepụta faịlụ ọhụrụ, ndekọ na wdg.
nke a ọ bụ ihe nkịtị na elementrị?
Kedu ihe m ga - eme iji nye ya ọrụ ndị ahụ amaghị m maka gị mana ọ dị m ka ọ dị iche na ọ dị ka imefusị bọtịnụ hehe
Abụ m ọkara ọzọ n'okwu a, dịka onye ọ bụla ọ masịrị m ịgagharị na-etinye aka m na mmụta.
Nchegbu a nke gị bụkwa nke m, dịka na pantheon n'onwe ya ọ gaghị ekwe omume iji kwado desktọọpụ, ọbụlagodi na m ruru nkwubi okwu ahụ mgbe ụbọchị ụfọdụ na-achọ ihe. Achọtara m ụzọ dị irè m ga-esi pụta ebe a. http://www.hongkiat.com/blog/elementary-os-luna-tips/
Ọ bụghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị ihe na-erughị na-agba ọsọ Nautilus ọnụ ka ọ na-ejikwa desktọọpụ. Ọ na-eje ozi ma ị nwere ike itinye isiokwu elementrị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ naghị ele otu anya.
Ọ bụrụ na ị maara ihe ka mma, kwuo okwu na ya. Distro dị mma ma ọ bụ ihe ihere na ọ ga-efufu n'akụkụ ahụ.
Daalụ maka azịza ya, maka ihe ngwaike nke eriri tube m ga-ewepụ ma wụnye xubuntu mana m na-echesi echiche ike banyere ịnweta pc raara nye eOS, ozi gị ga-enyere m aka nke ukwuu ...
Onye ọ bụla nwere ike ịkwado akara, ụdị laptọọpụ kwekọrọ n'ezie na eOS, na gọọmentị webụsaịtị ha gosipụtara Luna na lenovo, kedu ihe ị chere enwere akara aka ọzọ dabara adaba, na-enweghị ọdịda vidiyo, oke mmiri, arụmọrụ n'onwe ya?
Na lenovo bụ ndị dị elu na ọnụahịa, ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla ọzọ ika hà ma ọ bụ mma na eOs ga-amasị m mara.
Enwere m Hp g42 amd dual core mana ọ bụ agadi n'ihi iji ya na-ekpo ọkụ nke ukwuu, ma e wezụga ya nwere njehie mgbe ị na-eji eOS hotcorners, windo thumbnails adịghị mma. Ọ bụ ya mere m ga-azụta nke ọhụrụ.
Daalụ n'ọdịnihu 😀
Enyi M ugbua etinyere elementrị os luna mana nsogbu bu na odi oke. Ọ dị m ka ihe ijuanya etu m ga-esi enyocha ma ọ dịghị ihe ọ bụla na-efukarị m.Ọ bụ oge izizi m tinye linux.
Ndewonu mmadu! Emechara m tinye EOS na ndetu m na enwere m nsogbu, enwere m Samsung TV jikọtara site na hdmi ọ na-amata ya mana TV na-egosi m ozi na "ọ naghị enweta akara", ọ mere mmadụ?
Ndewo, taa, m wụnye Elementary OS na m nwere ajụjụ na-esonụ:
M na-eji abụọ Monitors (HDMI na VGA) nsogbu bụ na mgbe ịtụkwasị m paswọọdụ na ịpị tinye, onye nke meziri gara nwa na ndị ọzọ na-acha ọcha….
Ana m eji kaadị eserese nke ASUS RADEON HD 6570.
Enweghị m ike igwu egwu mp3, agbasoro m ihe ị kwuru na ọ na-atụpụrụ m ozi «achọrọ etinye njikọ GStreamer», agbanyeghị na a na-emelite usoro a ugbu a, mana ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọzọ, ana m ahapụ gị ajụjụ a, ọ dị ezigbo mma ihe omuma, daalụ nke ukwuu.
Zaghachi Federico Pereyra
M tinyechara ELEMENATARY OS yana nchịkọta niile ị kwadoro. Ebe obu na m di ohuru na Linux, a na m aju gi.
kedu ka m ga-esi tinye ngwa, folda, faịlụ, wdg. na desktọọpụ. Ọ na-ahapụ m n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Ma mgbe ị lụsịrị ọtụtụ ihe ị kụrụ gallarda nke iri na ise dị ka ụgwọ ọrụ maka ọtụtụ njem.
Otu esi edozi nsogbu na OS na laptọọpụ HP m anaghị achọpụta kaadị netwọk WIFI, ọ dị ka ọ kwụsịrị. Gịnị ga-abụ koodu iji wụnye? Daalụ
Federico Gustavoo Pereyra kwuru dijo
Ihe ngwọta ga - abụ jikọọ pc na ịntanetị site na Ethernet ma nye ya mmelite ọkwọ ụgbọ ala, yabụ ndị nọ na wifi board ga - arụ ọrụ na - akpaghị aka, gbalịa ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ anyị nwere ike ịchọta ngwọta ọzọ, mana nke a ga - abụ nke kachasị mfe. Cheers
Zaghachi Federico Gustavoo Pereyra
Adidiri Ortiz dijo
Enwere m otu nsogbu ahụ oge ọ bụla m melite eOS. Emegoro m ya moderately wụnye / ntinye wi-fi nkwụnye site na USB ... mgbe ahụ na usoro mmasị m na-achọ akara ngosi nke ndị ọkwọ ụgbọala ọzọ ma hapụ ya ka ọ chọpụta ha ma emesịa rụọ ọrụ. Maka nke a, achọrọ njikọ asntanetị ka m na-enweghị ethernet ọ bụ ya mere m ji eji nkwụnye mpụga. Emechaa m nwere ike ijikọ, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ enwere m nsogbu njikọ. Kaadị m bụ Broadcom. eOS bụ ezigbo usoro. Tupu m jiri ube OS x ma achọpụtara m na ọ nwekwara ọtụtụ nsogbu yabụ na agbanyeghị m ọkachamara, ọ masịrị m ịnwale idozi ihe na-enweghị ọnụ. Ana m eji netbook m dị ka sava ịntanetị iji nwalee ụfọdụ sistemụ mepere emepe (http://clavius.tij.uia.mx) na m wụnye fọrọ nke nta niile flavors nke Ubuntu na eOS m na-adịghị amasị ma ugbu a, m nnọọ mma na nke a distro.
Zaghachi Adalid Ortiz
Ndewo, daalụ maka onyinye gị, ekpebiri m ịhapụ Windows nwa oge (enwere m olile anya) wee họrọ Elementary dị ka naanị sistemụ. Ruo ugbu a ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma belụsọ na njikọ wifi m na-apụ apụ mgbe niile yana nke ahụ na-ewe iwe. Nyere m aka imezi nke a biko. Na mbu, ekele.!
Enwere m laptọọpụ Acer V5. Intel isi i3.
Ajuju, kedu ka esi esi wunye ndi ọkwọ ụgbọala maka poolu wifi? Enweghị m ike ijikọ na ịntanetị
Ndewo, a na m anwa itinye windo dị ka jelii na enweghị m ike ịchọta ntọala onye ọrụ na ọnọdụ xfce, ị sị gaa nhazi mana enweghị m ike ịhụ ya ebe ọ bụla, kedụ ka m ga esi banye na windo ahụ?
HI, nnukwu ọkwa, mana m na-enwe nsogbu na windo jelii. Ọ na-apụta na enweghị m ike ịchọta menu nke Oge na ịmalite n'ihi na amaghị m ebe m ga-aga mgbe ị gara nhazi, ị nwere ike inyere m aka?
Ndewo, ọtụtụ isi, elementary-tweaks na-agwa m na ọ nọghị, ma ọ bụ na ọ gaghị ekwe ka m wụnye ya. Enwekwara ajụjụ banyere otu esi enweta Oge na ihe onye ọrụ. N'ihi na nhazi izugbe anaghị arụ ọrụ maka m, m ga-eme ma ọ bụ wụnye ihe?
nyere m aka, achọrọ m itinye windo jelii
Ọfọn, ekele maka izipu ozi, mana m dị ọhụrụ na elementrị na amaghị m ọtụtụ ihe banyere Linux.Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na onye ọ bụla hụrụ post a ga-enyere m aka ịghọtatakwu obere ihe gbasara sistemụ arụmọrụ.
Ahụrụ m OS a n'anya, ekele maka ntinye a. Mgbe ọ bụla ihe gwụchara ọ dị mma ịnwe ndụmọdụ ndị ọkachamara. Cheers!
Ndewo, ọ ga-amasị m ịga n'ihu na-eji Elementary OS, ọ bụrụhaala na m nwere ike iwunye ngwa na-enweghị njikọ intaneti, mmadụ nwere ike ịgwa m otu esi arụ ọrụ a?
Zaghachi Luis Villalobos
Firefox OS 1.1: na nkọwa na ọdịnihu